Famonjena - Howling Pixel
Ny famonjena dia ny fiarovana na fanafahana na fanavotana ny fanahin'ny olombelona amin'ny fahotana sy amin'ny vokatr'izany mba hahafahany ho velona mandrakizay fa tsy ny fanamelohana mandrakizay. Ny famonjena dia heverina fa vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra (azon'ny olona tsy mendrika izany), na vokatry ny safidy malalaky sy ny ezaky ny olona samirery (azon'ny olona noho ny fahamendrehany), na vokatry ny fikambanan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny ezaka ataon'ny olombelona. Tsy mitovy ny fiheveran'ny fivavahana samihafa ny atao hoe famonjena.
Ny afo fandiovana, araka ny fampianaran'ny Eglizy katolika indrindraindrindra, dia ny fanavotana ny fanahin'ny olona aorian'ny fahafatesana, izay anadiovana azy hoafaka amin'ny fahotana mila ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, na izay ianjadian'ny fanasaziana mandalo iaretan'ny mpanota aorian'ny famelana ny fahotana mahafaty nataony. Aorian'izany dia afaka ny hiditra amin'ny fahasambarana ny fanahin'ny olona. Ny Fiangonana tatsinanana sy ny Fiangonana tandrefana dia samy miaiky ny fisian'ny afo fandiovana ary mihevitra izy ireo fa toeram-pijaliana izany. Raha mino ny Fiangonana tandrefana fa handalo fisedrana afo ara-bakiteny ny mpanota, ny Fiangonana tatsinanana kosa tsy manazava ny karazana fijaliana hahazo ny mpanota. Ny Konsily tao Florentia tamin'ny taona 1439 dia nihevitra izany lohahevitra izany ho mbola azo iadian-kevitra.
Ny foto-pampianarana sy ny fanao tamin'ny Andro Antenantenany momba ny afo fandiovana dia niadian-kevitra ary ny mpanavao fiangonana protestanta dia nanda ny fisian'izany. Nilaza ny Protestanta fa ny famonjena ny olombelona rehetra dia efa vitan'i Jesoa Kristy ary izany famonjena izany dia avy amin'ny finoana an'i Kristy irery ihany. Ny fisian'ny dingana anelanelany sy ny fotoam-panabeazana sy fisedrana aorian'ny fahafatesana dia nampianarin'ny Fiangonana anglikana.
Ny Bokin'i Jona na Bokin'i Jônasa dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Mitantara ny amin’ny mpaminany Jona (na Jônasa) izay nirahin’Andriamanitra any Ninive (renivohitry ny Asiriana) mba hampibebaka ny mponina tao nefa nitady lalan-kafa tsy ho any. Niteraka fahasahiranan ho azy izany ka nandeha tany Ninive ihany izy amin’ny farany. Avotra tamin’ny fahatezeran’Andriamanitra ny mponina tao rehefa nibebaka. Tsy araka ny itiavan’i Jona azy izany famelan-keloka azon’izy ireo izany. Manambara ny boky fa tsy ho an’ny Jiosy ihany ny famonjena fa ho an’ny olombelona rehetra.
Ny Boky fahatelon'ny Mekabiana dia boky ao amin'ny Baibolin'ny Fiangonana ortodoksa etiopiana. Deoterokanonika io boky io ao amin'io Baiboly io fa apokrifa izy ho an'ny Katolika sy ny Ortodoksa hafa ary pseodepigrafa ho an'ny Protestanta. Izy no fohy indrindra amin'ireo Bokin'ny Mekabiana satria misy toko 10 fotsiny.
Manomboka amin'izao teny izao ilay boky: "Ary ireo nosin'i Ejipta dia hihoby ...". Misy fitantarana ankapobeny momba famonjena sy famaizana ny ao amin'io boky io, izay ahitana ohatra avy amin'ny fiainan'ny patriarka samihafa ao amin'ny Baiboly, toa an'i Adama sy i Joba ary i Davida mpanjaka.
Ao amin'ny litorjian'ny Fiangonana ortodoksa etiopiana dia mitambatra ho boky iray ny Boky faharoa sy ny Boky fahatelon'ny Mekabiana.
Ny Epistily ho an'ny Efesiana na Taratasin'i Masindahy Paoly ho an'ny Efezianina dia boky hita ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ny atao hoe epistily. Taratasy nalefan'ny Apostoly Paoly ho an'ny fiangonana kristiana tany Efesosy na Efezy na Efeso izany. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 60 sy 63 no nanoratana azy.
Ny fahasoavana dia fitahiana omen'Andriamanitra malalaka ho an'ny olona izay mahazo ny famonjena sy fanamasinana maimaimpoana. Hita ombieniombieny io teny io ao amin'ny teolojia kristiana. Zava-dehibe koa ny fahasoavana ao amin'ny fivavahana jiosy (ny Jodaisma) araka izay hita amin'ireo boky ao amin'ny Tanakh ary toraka izany koa ny ao amin'ny finoana silamo sy ny sikisma izay manana ny ataony hoe "fahasoavana".
Ny fahotana dia fandikana an-tsitrapo na tsy an-tsitrapo ny didin'Andriamanitra ka heloka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ny fahotana dia mety ho ny tsy fanoavana na ny fandavana na ny fisakanana ny famonjena, na mety ho ny antony itrangan'ny fahafatesanan'ny fanahy. Mety hiseho amin'ny alalan'ny asa azo tsapain-tanana ny fahotana na koa amin'ny alalan'ny eritreritra manimba ny fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra.
Fahotana ny zavatra rehetra misakana ny fahatratrarana ny tanjona tsara tokony ho tratra araka ny fampianaran'ny fivavahana iray (mety ho ny famonjena izany tanjona izany na zavatra hafa). Tsy fahotana ny fandikana ny lalàna nataon'olombelona.
Ny olona tsy mino an'Andriamanitra dia tsy mino koa ny fisian'ny fahotana nefa tsy amin'ny fivavahana rehetra no ahitana ny atao hoe fahotana fa amin'ny sasantsasany ihany. Ny tontolon'ny finoana jiosy sy kristiana ary silamo no tena iresahana betsaka ny amin'ny fahotana.
Ny fanavotana dia famonjena entin'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Ny teny nadika amin'ny teny malagasy hoe "fanavotana" dia teny ampisaina amin'ny raharaham-pitsarana izay ilazana ny zavatra atao mba hividianana ny fisitrahana zo.
Ny teny nadika hoe "fanavotana", izay midika hoe "fividianana indray", dia fomba fiteny teolojika ao amin'ny fivavanhana kristiana, izay manantitra ny endriky ny zava-miafin'ny famonjena ny olombelona. Avotan'Andriamanitra amin'ny fanandevozan'ny ratsy sy ny fahotana azy ny olombelona mba hahanomezany azy indray fahafahana. Voavonjy ny olombelona satria navotan'Andriamanitra.
Ny gnostisisma dia firehan-kevitra na rafi-pisainana ara-pilozofia sy ara-pivavahana tsy natao ho fanta-bahoaka izay mihambo hanam-pahalalana feno an'Andriamanitra sy ny zava-drehetra sady manankina ny famonjena amin'izany fahalalana izany. Nivoatra tamin'ny taonjato faha-2 sy faha-3 taor. J.K. ny gnostisisma. Nivoy hevitra mifanohitra amin'izay ataon'ny ankamaroan'ny Kristiana hoe "finoana marina" ny gnostisisma na dia nisy ampahany amin'ny mpanaraka azy aza isan'ny Kristiana ihany. Ny mpanaraka ny gnostisisma dia atao hoe Gnostika.
Mampanantena fahalalàna miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny gnostisisma ka milaza fa misy pitik'afo araka an'Andriamanitra milatsaka avy amin'izany fanjakana mihoa-draha izany manketo amin'ity tontolon'ny zaka ity, izay eo ambany fanapahan'ilay Ratsy, sady migadra ao amin'ny vatan'ny olombelona. Voafohan'ny fahalalana ilay singan'andriamanitra ao amin'ny olombelona ka miverina any amin'ny toerana tokony hisy azy, dia ny fanjakana mihoa-draha any an-danitra. Ny olombelona dia noforonin'ny andriamanitra ambany tsy tonga lafatra, dia ilay Mpahary izay taon'ny Gnostika hoe Demiorga na Iahveh koa. Ity andriamanitra ratsy ity dia mifanohitra amin'ilay andriamanitra ambony izay sady tonga lafatra no mihoa-draha nefa mifandray amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny fahalalana nomeny.
Martin Lotera dia teolojiana alemàna isan'ireo nitarika ny Fanavaozam-piangonana na Reformasiona protestanta tamin'ny taonjato faha-16, teraka tamin'ny 10 Novambra 1483 tao Eisleben ary maty tamin'ny 28 Febroary 1546 tao Eisleben ihany koa.
Ny fanavaozam-piangonana notorin'i Martin Lotera dia nisy vokany lehibe teo amin'ny fandrosoan'ny kristianisma ary ny foto-pampianarana nipoitra tamin'izany dia nisy akony teo amin'ny fianinan'ny vahoakan'i Eoropa, tsy amin'ny ara-pivavahana ihany fa amin'ny lafiny ara-politika sy ara-toekarena koa.
Nisahirana ny amin'ireo fanontaniana momba ny fahafatesana sy ny famonjena izay nampiavaka ny kristianisma tamin'ny Andro Antenantenany i Lotera, ka nanovo valinteny avy tao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romana. Araka ny hevitr'i Lotera, ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia fanomezana malalaka avy amin' Andriamanitra izay raisina amin'ny alalan'ny fibebahana amin-kitsim-po sy amin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy ho Mesia, tsy misy fanelanelanan'ny Fiangonana. Nihantsy fahefan'ny papa i Lotera amin'ny filazany fa ny Baiboly no hany loharanon'ny fahefana kristiana.
Ny andian-teny latina hoe Solus Christus, izay midika ara-bakiteny hoe "Kristy irery", dia manambara fa ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia tsy maitsy mandalo amin'i Kristy mivantana sy amin'ny alalany irery ihany. Adika amin'ny teny malagasy hoe "Kristy irery ihany" na "Jesosy irery ihany" io andian-teny io. Izany dia midika fa i Jesosy Kristy no hany mpanelanelana fa tsy ny mpitondra fivavahana. Ity ainga fototra ity, izay mampiavaka manokana ny protestantisma dia isan'ireo andian-teny filamatra dimy manomboka amin'ny teny hoe Sola izay andrin'ny soteriolojia protestanta. Azo soratana hoe Solo Christo izay mlidika hoe "amin'ny alalan'i Kristy irery" io andrian-teny io.
Tsy mitovy amin'ny lahateny mahazatra ny toritenin'i Lotera izay tsy miakina amin'ny foto-pampianarana sy ny lovantsofina na lovam-pinoan'ny Fiangonana katolika tao Roma. Mihevitra i Lotera fa ao amin'ny Baiboly no misy ny foto-pivoasana ao amn'ny Filazantsara (na Evajely) sy ny Epistily (na Taratasy) momba an'i Jesosy Kristy, indrindra ao amin'ny Epistily ho an'ny Romana; ho an'ny Protestanta miorina amin'ny Solus Christus, izany dia mifandray amin'ireo fanambaràna lehibe ao amin'ny Fanekem-pinoana apostolika sy ny fanekem-pinoana hafa rehetra noraisin'ny ankamaroan'ny protestanta toy ny Fanekem-pinoana aogostana. Ny hoe Solus Christus dia manambara fa ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia tsy amin'ny alalan'ny fanelanelanan'ny andrim-pivavahana (latina: institutio) na ny olona masina na ny sisan-javatra navelan'ny maty (latina: reliquiae).
Ny soteriolojia dia sampan'ny teolojia izay andalinana ny amin'ny famonjena. Ny soteriolojia dia teolojian'ny famonjena. Tsy ny Kristianisma ihany no azo anaovana soteriolojia fa ireo fivavahana hafa koa izay ahitana ny firesahana ny amin'ny famonjena. Avy amin'ny teny grika hoe σωτηρία / sôtêria izay midika hoe "famonjena" sy ny hoe λόγος / logos izay midika hoe "resaka" na "fandalinana" na "fahalalàna". Ny teny hoe σωτηρία / sôtêria dia nisampana avy amin'ny hoe σωτήρ / sôtêr izay midika hoe "mpamonjy".